अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा बारे प्रचण्डले गरे सनसनी पूर्ण खुलासा, के भने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले आफ्नै पार्टीबाट अर्थमन्त्री भएका डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गरेपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसबारे मुख खोलेका छन्।
सरकारमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिएका खतिवडाको तिव्र आलोचना भइरहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि उनको साथ दिदैँ भने ,‘अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैनन् ।’ सरकारमा मन्त्रीहरूको हेरफेरको तिव्र तयारी भइरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडालाई अध्यक्ष प्रचण्डकै साथ रहेको स्रोतले बताएको छ।
सरकारले करको दायरा बढाएर नेपाली जनताको ढाड सेकेको भन्दै अर्थमन्त्रीको विरोध भइरहेका बेला प्रचण्डले चितवन पुगेर खतिवडाको बचाउ गर्न समेत भ्याएका छन् । तर अन्य मन्त्रीहरू हेरफेर हुनसक्ने उनको धारणा थियो ।
Previous Previous post: महेशले गरे नेपाल महिला रेस्लिङ्ग फाउण्डेसनको उद्घाटन
Next Next post: प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमाथि राप्रपा अध्यक्ष थापाको यस्तो हमला